काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि थपियो निषेधाज्ञा — Imandarmedia.com
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको छ । उपत्यकामा थप १ हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय भएको हो । उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका सिडिओहरुको संयुक्त बैठकले १ हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले असार ११ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । तर यसपटक निजी सवारी साधन पनि जोर नम्बर प्लेटको जोर बार र विजोर नम्बर प्लेटो विजोर बार चल्न दिने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
उपत्यका प्रशासनले कोभिड–१९ भाइरसको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने भन्दै १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता डेढ महीनासम्म क्रमशः निषेधाज्ञा थपिँदै आएको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार अब बारका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
उनका अनुसार आइतबार, मंगलबार र बिहीबार सुनचाँदी, भाँडा, विद्युतीय, घरायसी सामान बिक्री गर्ने पसल सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै, अटोमोबाइल र त्यसका पार्टपूर्जा पाइने पसल पनि खुल्नेछ । सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता पसल खोल्न दिने निर्णय भएको छ । यस्तै फेन्सी, कस्मेटिक, गिफ्ट र टेलरिङ खुल्नेछन् ।
‘आइतबार, मंगलबार र बिहीबार ११ देखि ४ बजेसम्म सुन, भाँडाकुडा, अटो मोबाइल्स, विद्युतीय सामग्रीका पसल खोल्न दिइने निर्णय भएको छ,’ पराजुली भने,‘सोमबार, बुधबार र शुक्रबार ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म सपिङ मल, खेलकुद सामग्री, कपडा, जुत्ता, साडी, कस्मेटिक्स, फेन्सी, टेलरिङ, गिफ्ट पसल खोल्न दिइनेछ।’
नेपालमा थप २,४४२ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र ५१ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा १०,९५६ जनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। तीमध्ये ४,२४९ परीक्षण एन्टिजन विधिबाट गरिएको हो।
सो अवधिमा ३,४५६ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको पौडेलले आइतवार अपराह्ण जनाएका छन्। यससँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या छ लाख ४७ हजार नाघेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ८,७२६ पुगेको छ।
पौडेलले भने: “अहिले ४२ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। अहिले १७ जिल्लाको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा र अन्यमा घट्दो क्रममा रहेको छ।” अहिले कुल ५५,५३२ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण रहेको र तीमध्ये ३,६९९ जना संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका छन्।
उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका १० जिल्लाहरू क्रमानुसार काठमाण्डू, ललितपुर, रुपन्देही, भक्तपुर, मोरङ, कैलाली, चितवन, धनुषा, सुनसरी र काभ्रे रहेको छ।
पौडेलले गत २४ घण्टाको परीक्षण नतिजामा गण्डकी प्रदेशमा सङ्क्रमण दर झन्डै ४५ प्रतिशत, कर्णालीमा ३७ प्रतिशत र प्रदेश १ मा २३.७ प्रतिशत देखिएको बताए। देशभरिको सङ्क्रमण दर २१.३ प्रतिशत रहेको र यो घट्दो क्रममा रहेको पौडेलले बताए।
काठमाडाैं उपत्यकामा धेरै
अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको भए पनि पुष्टि हुनेमध्ये अन्यत्रको तुलनामा काठमाडाैं उपत्यकाका धेरै भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आइतवार पुष्टि भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ४५० जना काठमाण्डूका रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा २५ र ललितपुरमा ५३ जना सङ्क्रमित थपिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये अहिले ८७१ जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आईसीयूमा र २५० जना भेन्टिलेटरमा छन्। लिङ्गका आधारमा हेर्दा कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनेहरूमा ३९.१० प्रतिशत महिला छन् भने ६०.९० प्रतिशत पुरुष छन्।
डा. बाँस्तोला भन्छन्- पहिले आइसियूबाट निस्किँदा तीन सय मिसकल हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका टेकु अस्पतालका डाक्टर अनुप बाँस्तोलाले पछिल्लो समय अस्पतालमा संक्रमित चाप निकै कम भएको बताएका छन्। संक्रमितको चाप घट्न थालेपछि अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत धेरै सहज भएको उनी बताउँछन्।
‘अहिले संक्रमितको चाप निकै कम छ। इमर्जेन्सीका बेडहरू लगभग खाली छ। बाहिर टहरामा बनाइएको बेड पनि हटाइसक्यौं। वार्डहरू पनि विस्तारै खालि हुँदैछ,’ बाँस्तोलाले भने।
अस्पतालको आइसियू इन्चार्ज समेत रहेको उनले गत वैशाखको अन्तिम साता र जेठको पहिलो तीन साता निकै कठिन परिस्थिति रहे पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको जनाए। त्यो बेला आइसियू, भेन्टिलेटर, वार्ड, इमर्जेन्सी सबै संक्रमितले भरिएको र बाहिरै राखेर पनि संक्रमितको उपचार गरिएको उनले बताए। अहिले भने आइसियू बेडहरू पनि विस्तारै खालि हुँदै गएको उनी बताउँछन्।
अहिले आइसियूमा भर्ना हुने संक्रमितहरू नयाँ भन्दा पनि बढी नीजि अस्पतालबाट रिफर मागेर आउनेहरू रहेको उनले बताए। ‘अहिले धेरै नीजि अस्पतालहरूमा पैसा सकिएर आउनेहरू हुनुहुन्छ। तर आइसियूका बेडहरू पनि विस्तारै खाली हुँदैछन्,’ उनले भने।
संक्रमणको दोस्रो लहर भयावहका बेला टेकु अस्पतालमा मात्र सय बढी संक्रमितको उपचार हुन्थ्यो, अहिले ६० जना हारहारीमा संक्रमितहरू उपचाररत छन्। अर्थात संक्रमितको चाप झन्डै आधा कम भएको छ। अहिले संक्रमित चाप घटेसँगै स्वास्थ्यकर्मीको धपेडी पनि कम भएको डा. बाँस्तोला बताउँछन्।
‘पहिले त रातिको बाह्र बजे आइसियूबाट निस्किँदा तीन सय मिसकल हुन्थ्यो। कल ब्याक पनि गर्न पाउँदिनथेँ। अहिले त राउण्ड तीन चार घण्टामै सकिहाल्छ। त्यसैले अलि सास फेर्न पाइएको छ,’ उनले भने।
यद्यपि संक्रमण घटिरहँदा जोखिम भने हटिनसकेको भन्दै उनले अझै सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। अहिलेको स्थिति पहिलो लहर उत्कर्षमा पुगेर शिथिल हुँदाको अवस्थाजस्तै रहेको भन्दै उनले फेरि लापरवाही गरे उस्तै अवस्था भोग्नुपर्ने बताउँछन्। बाँस्तोला भन्छन्, ‘पहिलो लहर मंसिरपछि घट्दै गयो। तर फागुनमा हामीले जुन लापरवाही गर्दा त्यसको परिणाम चैत वैशाखमा भोगियो त्यो स्थिति फेरि नाआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।’
साथै नेपालमा पूर्ण रुपमा सर्वसाधारणले खोप नलगाएको स्थिति हुँदा जोखिम रहिरहने उनको तर्क छ। जारी निषेधाज्ञालई खुकुलो बनाउँदा निकै व्यवस्थित ढंगले खुकुलो पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अघिल्लो लहरमा पनि लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा सर्वसाधारणमा हेलचेक्राइ भएपछि त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको बताउँदै उनी यसपटक त्यो गल्ती गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्।
‘पहिलो लहरपछि गत फागुनमा सर्वसाधारण जसरी बाहिर निस्केका थिए, यसपालि निस्केका छैनन्, त्यसले पनि संक्रमण दर न्यून गर्न मद्दत गरेको हो,’ डा बाँस्तोला भन्छन्, ‘तर दोस्रो लहरमा ठ्याक्कै कति संक्रमित भए भन्ने तथ्यांक छैन। त्यो भएको भए आगामी रणनीति तय गर्न मद्दत पुग्थ्यो। त्यसैले निषेधाज्ञालाई खुलाउँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पनि नेपालमा संक्रमण दर घट्दै गएको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा संक्रमण दर आधाभन्दा कम भएको छ। अघिल्लो महिना संक्रमण दर ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएकोमा अहिले २० प्रतिशतमा झरेको छ। गएको २४ घण्टाको तथ्यांक हेर्दा पनि संक्रमण दर जम्मा २०.५२ प्रतिशत छ। जबकी दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला संक्रमण दर ४८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
संक्रमण दर विस्तारै घट्दै गएका कारण सरकारले जारी निषेधाज्ञालाई पनि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगको छ। यसअघि खाद्यान्न पसलहरूलाई बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुल्न दिइएकोमा गत असार १ गतेदेखि भने बिहान ११ बजेसम्म खुल्न दिइएको छ। साथै अब थप गरिने निषेधाज्ञालाई अझ खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी छ।
अब थप हुने निषेधाज्ञा कुन मोडालिटीको हुने भन्ने तय गर्न आज उपत्यकाका तीन जना सिडिओहरूबीच छलफल हुँदैछ। जसमा निजी सवारीसाधनलाई समेत चल्न दिने भनिएको छ। तर यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ। यद्यपि पछिल्लो समय संक्रमण दर ओरालो लागेको भन्दै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा सरकार र विज्ञहरू सहमत छन्।